शाहरुखकी छोरी सुहानाको पारदर्शी ड्रेसको तस्वीर भाइरल – Butwal 24 News
शाहरुखकी छोरी सुहानाको पारदर्शी ड्रेसको तस्वीर भाइरल
August 30, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on शाहरुखकी छोरी सुहानाको पारदर्शी ड्रेसको तस्वीर भाइरल
एजेन्सी, १४ भदौ । बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खानको फ्यान फलोइङ कुनै स्टारको भन्दा कम छैन् । सुहाना सामाजिक सञ्जालमा धेरै सक्रिय छिन्। उनले प्रशंसकहरुमाझ आफ्नो ग्लामरस तस्वीरहरु साझा गरिरहन्छन्।
हालै, सुहानाले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा एक तस्वीर साझा गरेकी छिन्, जुन सोशल मीडियामा धेरै भाइरल बनिरहेको छ। यो तस्वीरमा, सुहानाले एक सेतो रंगको पारदर्शी क्रप टप, कालो रंग को स्लिप टप लगाएको देखिएको छ। निलो रङको पेन्ट लगाएकी छिन् । तस्बिरमा सुहाना घाममा उभिएर पोज दिइरहेकी छिन्। यो तस्वीरसँगै क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, ‘अन्तिम दिन ।’
यसअघि सामाजिक सञ्जालमा सुहानाले रातो र बडीकोन पोशाकमा आफ्नो सुन्दर तस्वीर शेयर गरेकी थिइन्। सुहाना हाल न्यूयोर्कमा अध्ययन गरिरहेकी छिन्। बलिउडमा डेब्युको तयारी गर्दै गरेकी सुहानाको फ्यान फलोइङ कुनै स्टार भन्दा कम छैन। सुहानाका तस्बिरहरु इन्टरनेटमा आउनेबित्तिकै भाइरल हुन्छन्।
फोनको स्टोरेज फुल भएर दिक्क हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
बिबाह पछि छत्र शाहिको गाँउमा काजल जोशिलाइ एस्तो सम्म भयाे, भिडियो सार्वजनिक गरे छत्रले बिबाहको(हेर्नुहोस भिडियो सहित)
October 10, 2021 October 10, 2021 Butwal 24 News
भाइरल सचिन परियार फेरि यस्तो अवस्थामा ,बाटोमा गित गाएर पैसा बटुल्दै ,कठै इन्द्रेणीका कृष्ण कँडेलले पढाउन राखेको ठाउँमा केभयो फेरि पढाई छोडेका हुन? (हेर्नुस् भिडियो )
October 27, 2021 October 27, 2021 Butwal 24 News
यसरी चर्चित हुँदैछ विष्णु माझीको दशैं–तिहार गीत
September 23, 2021 Butwal 24 News